Ukunakekelwa kobuchwepheshe bezinwele ezinama-curly
Izinwele ezikhazimulayo kuyisimangaliso semvelo, okubaluleke nakakhulu kunamaza olwandle noma izimpande zesihlabathi. Ukubukeka kwabo akuchazwe ngemithetho yenyama, mhlawumbe izakhi zofuzo. Ukwesaba kuyisipho, futhi uma unomcebo onjalo, funda ukubonisa ukunakekelwa nokuwuthanda. Futhi kulokhu uyosizwa ngemithetho eyisisekelo yokunakekelwa kobuchwepheshe bezinwele ezibukhali.
Ngaphandle kwezinzuzo zabo eziqondile, izinwele ezigobile zinamanye amazwe. Okokuqala, izinwele ezigobile ziyize kakhulu. Uma unezinwele ezinzima kakhulu noma ezithambile kakhulu, akulula ukuba zithathe isimo esifanele, futhi kufanele uzibeke ngokucophelela nge-gel noma i-foam. Ngesikhathi esifanayo, kunzima ukubiza izinwele ezingalaleli zibuthakathaka noma zingenampilo. Lokhu kuhlosisa kubheka kuphela ifomu labo, kodwa hhayi isimo sangaphakathi. Ukuze unqobe lezi zwele, ziphahlaze ngamaski amancane okunyusa ukuze unike silk and softening. Usizo kanye nemithi yokwelapha - isibonelo, i-henna emhlophe izokwenza izinwele ezithambile ziqine, futhi zinzima. Ngendlela, zonke izindlela zisiza ukuqinisekisa ukuthi ama-curls anempilo!
Izinkinga ezingathí sina ezihlotshaniswa hhayi kuphela nge-styling, kodwa nempilo yezinwele ezibukhali zikhona. Uma bebevele bevezwe ukucaciswa, ukukhwabanisa, ukuguqulwa kwamakhemikhali noma ukuqondisa, izinwele ezinjalo zingase zibizwe ngokuthi zonakalisiwe futhi zidinga ukunakekelwa kobuchwepheshe bezinwele ezibukhali. Cabanga ukuthi isimo sini, uma wenza lokhu njalo! Uma uvame ukudweba izinwele ezisekhaleni, kakhulu ukuthi zimele futhi isikhathi esiningi sithatha ukubuyisela ngokuphelele i-shaft yezinwele. Kumele kuqashelwe: i-shaft hair is "trunk", ehlanganisa izilinganiso zangempela ezihambisana ngokuqinile komunye nomunye. Ebusika, ngomswakama ophezulu, izinwele zingakhula kakhulu futhi zivule ngenxa ye "porosity" yesikhumba esiphezulu se-scaly. Umkhawulo wezikali uqhubeka, igebe phakathi kwabo likhula, futhi ngaphansi kwezilinganiso ezivulekile zitholakala izinto ezihlukahlukene ezilimaza le golgo. Ngokwezinwele ezihambayo kuyingozi, ngoba izinwele zingase ziqale ukugoba noma ezindaweni eziningana. Ukuvimbela lokhu, ifilimu evikelayo kumele idalwe phezu kwezinwele. Ukuzivikela kusho ukuthi kufanelekile izinwele zakho, ugcine i-wrapper yezinwele njengebushelelezi ngangokunokwenzeka. Isethi ephoqelelwe: i-balm, i-shampoo kanye ne-mask.
I-shampoo efanelekile yezinwele ezigobile
Ukuze uqonde ukuthi i-shampoo kufanelekile noma cha, bheka ngokucophelela izingxenye zayo eziyinhloko. I-Shampoo yezinwele ezomile, ezidinga ukunxusa nokunyusa, kuphoqelekile ukuba iqukathe amafutha wejojoba, amafutha kakhukhunathi akhiphe noma i-licorice ikhishwe, i-cornflower ishicilelwe, i-lotus emhlophe, i-hazel witch. Izinwele, ezincane, ezinomunyu zidinga ukuqiniswa nokuvikelwa: inhlakanipho, i-papa, i-horseradish. Nika ama-shampoos anika ivolumu: aphethe ukubhubhisa izinwele ze-wavy. I-shampoo ye-Volume iphakamisa izikali (ukuphazamisa ukuvikelwa kwezinwele nokuholela ekudambiseni amanzi), noma ukwakha ifilimu ebusweni (ukuqina kwezinwele kwenza izinwele zibe nzima). Kunoma yikuphi, izinwele ezimele ziba yinto engcono kakhulu.
Balms for hair curly
Ama-balsams yizona izakhi eziyinhloko zokunakekela izinwele ezikhazimulayo. Ngokungathi, benza "ama-patches" ku-shaft wezinwele ezimele futhi banikeze umsoco owengeziwe. Ngezinwele ezijwayelekile, azifanelanga: unwebise izinwele futhi ulahle izinwele zevolumu. Kodwa izinwele ezibuthakathaka azikwazi ukuzenza ngaphandle kwalo.
Amaski akha ifilimu evikelayo kulo lonke ubude be-shaft hair. Kodwa-ke, ukuphakama okukhulu kakhulu kokuvikelwa nokwelashwa kwezinwele ezibucayi - lokhu kungumonakalo owengeziwe ezinwele ezibucayi, ngakho-ke, akudingekile ukusebenzisa amasonto ngaphezu kweyodwa ezinsukwini ezingu-10.
Ukuze uvikele ukunyuka kwezinwele ezinama-curly esimweni esibi sezulu, sebenzisa imikhiqizo yezitayela. Isibonelo, ama-conditioner-spray for hair curly: ahlotshiswe ngeyinkimbinkimbi yamaminerali, ama-extracts wezithelo, amavithamini kanye nezici zokulandelela. Uchungechunge lwanamuhla lwemikhiqizo yokunakekelwa kochwepheshe lwezinwele ezihambayo kusiza ukudala noma yiziphi izindophi noma ukugcizelela imvelo.
Okufanele ukwenze kusukela ekulahlekeni kwezinwele kwabesifazane
Ungayinakekela kanjani amakhambi omuntu wezinwele?
Izinwele zicibilika: izici kanye nezigaba zokwehla
Amakhambi asekhaya okubhalwa kwezinwele ngaphambi kwesikhathi
Indlela yokuphatha iziphetho zokuhlukaniswa
Indlela yokwenza izinwele ziphilile futhi zihle?
Iklabishi isetshenziswe nge-ananas
Imincintiswano yeqembu le-bachelorette
Yiziphi izenzo ezasiza uPavel Durov ukuba aphenduke ebhodini abe yi-op: izithombe ngaphambi nangemva kwe-plastiki
U-Rosa Syabitova uveze isimo sakhe sengqondo ngomshado wezivakashi
Ubiza ukuthini indoda futhi lokhu kusho ukuthini?
Ama-apula aphekwe ngamanothi kaphayini
Ukuzivocavoca ekhaya ngezingqungquthela
Cream of isobho iklabishi
Elektrogril - okumnandi, elula futhi ewusizo
Ikhekhe le-chocolate elikhethiwe